Plugins iPhone WordPress: Admin sy Theme | Martech Zone
Hatramin'ny fanavaozana ny bilaogiko sy ny fametrahana WordPress amin'ny Amazon S3, Afaka nanala plugins caching aho. Ny plugins caching dia tsy dia nilamina raha oharina amin'ny fanosehana ny sariko rehetra amin'ny S3. (Ny faktiora amin'ny volana voalohany ahy: $ 0.50).
Tsapako fa ny cache dia mety hanery ny fampisehoana fanampiny ivelan'ny tranokalako… saingy hanakana ahy tsy hanavao ilay tranokala amin'ny fanaingoana ho an'ny iPhone, Blackberry, ary ireo finday hafa. Ny olana dia ny mpitsidika iray dia afaka mitsidika ny pejy amin'ny fitaovana tanan-tànana, voahidy cache izy io, ary ilay olona manaraka dia atolotra azy io miaraka amin'ilay kinova fitahirizam-bokatra mitovy ao amin'ny tranokiriny feno. Ny lohahevitra momba ny cache sy ny dinamika dia tsy mifangaro tsara.
Ny plugin voalohany hitako tamin'ny fanatsarana tsara ireo lohahevitra ho an'ny iPhone, Blackberry, ary ireo fitaovana hafa entin-tanana dia ny WordPress Mobile Edition plugin.
Ity plugin ity dia novolavolain'i Vahoaka ankafizinao. Notsapaiko ny plugin tamin'ny iPod Touch ary ny Blackberry-ko ary samy manaitra ireo fomba fijery roa ireo. Kudos ho an'ireo mpamorona ity plugin ity amin'ny fanatsarana ny fomba fijery sy ny fitetezana ho an'ny Safari amin'ny iPhone na iPod Touch ary koa ny Blackberry sy ny fitaovana hafa.
Naoty iray amin'ny fametrahana ity plugin ity dia mila fametrahana hafa noho ny ankamaroan'ny plugins. Tsy maintsy mampakatra ny lohahevitra amin'ny lahatahiry lohahevitra aloha ianao, avy eo mampakatra sy mampihetsika ny plugin. Soa ihany fa nampahafantatra anao aza ny mpanoratra rehefa apetrakao tsy mety izany. 🙂
Fitantanana iPhone WordPress
Ilay plugin iPhone manaitaitra hafa hitako dia WPhone. Ny WPhone dia mamela anao hitantana WordPress tanteraka ao anatin'ny tontonana fitantanana nohamarinina ho an'ny Safari amin'ny iPhone na iPod Touch. Tena milay tokoa!
Tsy nametraka an'ity plugin ity aho satria matetika dia manao 'tinkering' mandroso miaraka amin'ny lahatsoratro tsirairay avy, fa ho anao ry olona mitady hatsaram-panahy iPhone WordPress vitsivitsy dia toa plugin tsara io!
Raha mbola mivoatra hatrany ny rafi-pitantanana atiny, antenaiko fa ampidirin'ny mpandrindra ny fampidirana finday sy ny fampidirana finday ho isan'ny tetikadin'izy ireo. Carl Weinschenk dia manana lahatsoratra mahafinaritra mamaritra ny ady amin'ny finday.
Miaraka amin'ny Opera Mobile alaina in-40 tapitrisa mahery ary ny iPhone izao dia mitaky 0.19 isan-jaton'ny fizahana manerantany… ny fanatsarana finday dia ho tombony kokoa amin'ny fifaninanana atsy ho atsy!
Tags: iphone pluginlohahevitra iphonewordpress adminWordpress theme
1 Jun 2011 amin'ny 3:46 AM
Ity tranonkala ity dia feno fampahalalana tena ilaina ho an'ireo mpamorona sy mpampiasa iPhone. Azoko antoka fa maro amin'ireo izay mitsidika an'ity tranonkala ity ihany no ho tia azy. Miarahaba ny tompon'andraikitra sy tompon'ity tranokala ity. Ity dia hanome fampahalalana bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny iPhones.